China CY-4 (Akangwara emagetsi mbatya rack) vagadziri uye vanotengesa | Jialong
Ungwaru hunochinja biochemistry
Yakareba urefu 1.56m Ukobvu hweinjini huru 7cm
Yakafara upamhi 31cm Nokusimudza dungwerungwe 0.2-1.3m
ruvara Iron ash, Kurota nhema, sirivha yechando
Inesarudzo neiyo yepakati muchinjika bar (tauro bhaa)
1, The zvinhu tinoshandisa ari avhiyesheni aruminiyamu.
2, Iyo yakakwidziridzwa scissor furemu uye willow chipikiri zvakagadzirwa nealuminium alloy, inova inotsvedza uye yakasimba.
3, Iyo multifunctional diki muchinjikwa bha kwete chete ine yekusimbisa basa, asi zvakare inogona kusangana yakasununguka yekuomesa nzira yehembe dzakasiyana.
4, Hard musimboti dhiraivhu moyo, AC shanduka frequency mota, zvichienzaniswa neyakajairika DC mota, yakafararira nekumhanya renji, kunyanya kushandisa chinyararire, kusimba kwenguva refu.
Nzvimbo yekumisikidza: Kunyangwe yako imba yakavakirwa-mukati mevharanda, solid wood top balcony, integrated integrated, gypsum top balcony, inogona kuiswa.
Iyo ine inorema-kutakura inokwana makumi matatu neshanu, inova inenge huremu hwekuwachira yemhuri yese muvhiki. Hembe huru dzemubhedha dzinogona zvakare kuomeswa zviri nyore, uye kuvhiyiwa kwacho kwakagadzikana uye kwakanyarara.
Kana kuwandisa uye kuwanda-kwazvino, mota ichadzikira otomatiki nemutoro wekutakura, kuitira kuve nechokwadi chekuchengetedza mune yekuomesa maitiro mune yakatenderera nzira.
Hunhu hwevanhu hunokanganisika hwekuyanika, hapana chikonzero chekuyedza kubvisa, chengetedza nzvimbo, nguva yekukura, inogona kuwedzera gumi nembiri mabara ekumusoro, zvidimbu zvidiki zvekupfeka, kuwedzera nzvimbo yekuomesa, kusangana nezvinodiwa zvekuomesa.
Wireless remote control, imwe kiyi oparesheni kuomesa, inogona kugadziriswa pamadziro, inogona zvakare kubviswa paruoko, kuvheneka, kusimudza paunoda.
Inogona kuona zvine hungwaru nharaunda yakatenderedza, inomira nekudonhedza kana ichisangana nevanhu uye zvinhu, uye iko kukwirira kuri mukati kusvika, uku uchidzivirira kuchengetedzwa kwenhengo dzemhuri.
Pashure: CY-5 (Akangwara emagetsi mbatya rack)
Zvadaro: CY-3 (zvakajairika zvekunze kusunda-kudhonza hembe hanger)